Apple inotangisa zviri pamutemo iOS 11.1 ne emoji nyowani, 3D Bata mhinduro uye nezvimwe | IPhone nhau
Apple inotangisa zviri pamutemo iOS 11.1 ne emoji nyowani, 3D Bata mhinduro uye nezvimwe
Apple ichangobva kuburitsa zviri pamutemo vhezheni yekupedzisira yeIOS 11.1 yevashandisi vese veIOS. Zvakanaka nezuro iyo beta 1 vhezheni yeIOS 11.2 yakaburitswa uye zvakaratidzika kuva zvisinganzwisisike kwatiri kuti ivo "vakasvetuka" vhezheni yepamutemo kuvhura beta, asi ikozvino isu tine vhezheni itsva inowanikwa kune vese vashandisi uye iyo yega beta inosara ndiyo yakatangwa nezuro kune vanogadzira.
Iyi vhezheni inowedzera yakanaka shoma yezvinhu zvitsva, zvinosanganisira boka rakanaka re emoji nyowani izvo isu zvatatoona mune yekutanga beta vhezheni (zombies, dinosaurs, anokwira, sikafu, akasiyana matauriro uye nezvimwe), iyo mhinduro yedambudziko neiyo 3D Kubata chiratidzo kudzvanya parutivi rwe iPhone uye multitasking uye zvimwe zvinowoneka.
Tiri kutarisana neshanduro yepamutemo uye nekudaro tinokurudzira kuiisa kuti ibatsirwe nekuvandudzwa kwakaitwa, asiri mashoma. Mukurondedzerwa kweshanduro yacho pachayo, tinowana iyo inopfuura makumi manomwe emoji nyowani yakaitwa sekuvandudza kwakanyanya, mhinduro kumatambudziko akasiyana siyana neMifananidzo kubva pakugadzirisa dambudziko nekutarisa kwemifananidzo kugadzirisa lag kana uchipuruzira pakati pescreenshots, kuvandudzwa kweKugona neZwi riri nani rekuwana mafaera ePDF kana kugadzirisa mune mamwe mabhii asina kuratidzwa, kune akajairwa bug fix uye dzakasiyana siyana kugadzirisa pane yapfuura vhezheni .
Iwe unowana iyo nyowani vhezheni yeIOS 11.1 inowanikwa zvakananga muZvirongwa> Zvizhinji zveyako iPhone, iPad kana iPod Kubata. Iyo saizi iyo inoratidza muiyo iPhone 5S iri 1,14 GB, saka iva nemoyo murefu kana kurodha pasi kuchitora nguva. Gadziridza!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inotangisa zviri pamutemo iOS 11.1 ne emoji nyowani, 3D Bata mhinduro uye nezvimwe
Ini ndakakwidziridza kuIOS 11 iyo nguva iyo yaibuda neiyo iPhone 7. Iwo lags uye reboots zvaive zvinogara uye zvakarovera kakawanda pazuva pazuva iyo nguva yandakakumbira imwe ye "simba".
Matambudziko aya akagadziriswa neIOS 11.1? Ndiri kutya kugadzirisa, kuti zvinokanganisa uye kusakwanisa kudzoka ... 🙁
Dai iwe waive ne5s kana matanhatu ini ndaikuudza kuti ugare paIOS 6 asi ne10 ini ndinofunga kuti zvine musoro chinhu kugadzirisa uye nezvimwe neiyi vhezheni 7 inoita kunge yakagadzirisa akawanda matambudziko akange achiratidzwa neIOS 11.1
Alejandro Castellanos akadaro
Sezvo ini ndakagadziridza beta 5 ndine matambudziko ese ebhatiri akagadziriswa. Gadziridza! pakupedzisira pane mhinduro yebhatiri
Pindura kuna Alejandro Castellanos
Neshanduro dzakapfuura waive wakagwamba nechando? Ndinodaro, nguva dzose.
Sekutaura kwaAlejandro Castellanos, madhiramu ari nani.
Muma5s ndiri kushamisika mafambiro azvinoita. Zvine musoro kuti dzimwe nguva ine mamwe lag asi iri yekare iPhone! maererano
Zvakanaka, Jordi aive nemafungiro akafanana newe, ndakashamisika zvikuru nekushanda kwakaita mukadzi wangu makore mashanu pandakaenda kubva kuios 5 kusvika kuIos 7.0.2 …… zvese zvakashanda mushe, mvura uye zvakawandisa zvakafanana zvakafanana nekushanda kwayaiita muIOS 11.0.2, ndakaita yekuvandudza kuburikidza iTunes. Mune ino 7, iyo munhu wese aipengereka pamusoro, ndakafunga kuimutsiridza kuburikidza neOTA sezvo yaive "diki" gadziriso (sekuita kwandakaita kasingaverengeki nemamwe madhizaini eIOS) uye kunze kwekutora ingangosvika maminetsi makumi matatu kumutsidzira ini ndawana kushamisika kusingafadzi kwekuti iyo animation yekuvhurwa kwefoni inoshanda ichigumburwa pese paunovhura… zvese! uye kunyangwe iyo foni yasara ingati inoshanda zvakafanana ne11.1, kuvandudzika kudiki kwekhibhodi kwaisanganisira… kunzwa kwekuve pamberi peiyo iPhone inokambaira iri capital, kwete nekuti iyo system inodzokera kumashure nguva dzese, asi nekuti kupinda kweIOs kunosuwisa….
kwenguva diki yakasiyiwa nemukadzi wangu nema5s (kubvira panosvika X ndichagara nhaka yangu 6S) ndinofunga ndichaisiya yakadaro, asi neichi chigadziriso ivo vasiya ruzivo rwangu rwevashandisi rwakadzikira zvakanyanya kupfuura zvandaive narwo simudzira kune ichi chinofungidzirwa chakanakisa ios 11… ..
Ndine 6 uye madhiramu anopenga. Ini ndinosiya imba yangu na8: 30 uye nekushandisa kushoma ndinosvika kumba ne65% / 55%
Wakagadzirisa dambudziko iri here?
Ini ndinosvika kumba na14.30: 90 masikati kuti handina kuzvitaura uye ndisati ndasvika ne85% -XNUMX%
Gustavo Rodriguez akadaro
Ndine Iphone5S asi inondiudza kuti iyo yekuvandudza inorema 256 Mb? pane chakaipa ???
Pindura kuna gustavo rodriguez
Ini handifunge kudaro, zano nderekuvandudza pasina kutya
Ini ndinokurudzira iwe kuti upe ruzivo rwangu nderekuti iwe unogadziridza kana uchikwanisa kuburikidza neTunes, nekuti ini ndakave neruzivo rwakashata neiyo yekuvandudza kuburikidza neOTA.
Mhoroi, ini ndichangobva kuvandudza uye ini ndangoona kuti chinhu chega chavaifanira kugadzirisa kuitira hupenyu hwangu, havana kuchigadzirisa uye ndiko kuti ndinogara ndine nguva yakatarwa yekushandisa uye pese panodzimwa foni, kutangwazve , nezvimwewo… .. Kana iwe ukaibatidza, wachi iri mukugadzirisa otomatiki uye nguva yashandurwa pachayo, zvinoita kunge zvakapusa asi kwandiri kwandiri izvo zvidiki diki, hupenyu hwangu hunogumbura! kwaziso uye rombo rakanaka kune avo vari kufara !!
Mhoroi, ndakagadzirisa yangu iPhone 7 uye bhatiri rakagadziridzwa zvinoshamisa, zvisinei, mune yangu iPad Air 2 ndakave nezviitiko zvakashata. Sezvo iOS 11 iine lag mubhokisi, iyo yandaitarisira kuti yaizogadziriswa neIOS 11.1 asi yakanga isiri, zvakaitika ndezvekuti zvakandiunzira rimwe dambudziko, zvinoita sekunge iyo accelerometer yakatanga kukundikana, ndakaona kuti sei pakutamba Asphalt8 iyo mota yakasendamira kuruboshwe zvishoma nezvishoma kusvikira zvisingakwanise kutamba! Ini ndaifunga kuti yaive app asi ini ndakaedza vamwe uye zvimwe chete zvinoitika. Izvi zvakaitika kune mumwe munhu pane iyo iPad?
Iwo matambudziko anoenderera kuGoogle Pixel 2 XL: kukundikana mune portrait modhi uye yakashata odhiyo yekurekodha